Mayelana NATHI - Duoduo International Development Co., Ltd.
Inqola yemithwalo esongekayo
Indawo yokudlela Trolley
UDuoduo I-International Development Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2013. Singabantu abasebenza ngokukhiqiza kanye nokusabalalisa izinqola ezinhlobonhlobo zemithwalo, izinqola, izinqola zokuthenga, izinqola ezinamaphaneli acijile, izimoto zezingadi ezinemisebenzi eminingi kanye nolunye uchungechunge, izinhlobo ezingaphezu kuka-100 zemikhiqizo. Inkampani ithuthukisa imikhiqizo emisha ukuze yanelise izidingo zemakethe njalo ngonyaka.
Sine wokushaya umugqa, Welding umugqa, eguqa umugqa, umjovo udini umugqa, ebusweni ukwelashwa umugqa, inhlangano umugqa, ukuhlolwa umugqa kanye neminye imigqa professional ukukhiqizwa manje.
Sizuze ukwethenjwa nomusa kumakhasimende amaningi ngenxa yobuqotho obuhle, insizakalo yobungcweti nokulawulwa kwekhwalithi ephezulu. Inhloso yethu yesevisi yile: ukuklanywa okujwayelekile nokukhiqizwa, ukubukeka okuhle, ikhwalithi ezinzile nokuhlala isikhathi eside. Manje, e-Yiwu International Trade City, inhlokodolobha yomhlaba, sinezitolo zethu eziqondile futhi sinikezwe isihloko semakethe "somhlinzeki ophambili". Sine amandla ezimele we-R & D nezinga eliphezulu lenkonzo, abangane abemukelekile abavela kuwo wonke umhlaba ukuze baxoxisane ngebhizinisi.
Siyaziqhenya ngekhwalithi nokuvumelana komkhiqizo nenkonzo enikezwa amakhasimende ethu futhi silapha ukwenza isipiliyoni sakho sokuthenga ku-inthanethi sibe sihle kakhulu. Esitolo sethu esiku-inthanethi, kukhona ukukhetha okuhle. Ngeminyaka eminingi yesipiliyoni ebudlelwaneni obuqondile nomhlinzeki womkhiqizi namakhasimende ethu, sihlala sikhombisa ubungcweti bethu ukuze uzizwe ungcono uma uthenga lapha.
Yonke imiyalo iphathwa ngokucophelela okukhulu ukuhlangabezana nezidingo. Siyakwazisa ukubaluleka kokuthenga kwakho, yingakho sithengisa kuphela imikhiqizo emisha, engavulwa, engasetshenziswanga esi-oda ngqo kusuka kumenzi. Amakhasimende ethu alindele, futhi azothola njalo, umkhiqizo osezingeni eliphakeme lapho u-oda nathi. Umgomo wethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngemikhiqizo efanele ngentengo elungile, elethwa ngesikhathi.
Sineqembu elinamandla lenkonzo yamakhasimende eligcina iso kuyo yonke inqubo yokuthengisa. Ithimba lihlale likulungele futhi lijabule ukukusiza, ukuxazulula ukubuyisa kwakho nokufaka okunye, futhi ulalele izikhalazo zakho. Ithimba lethu lenkonzo linamathela enkombandlela yalo.